Imvu, iCarron, embindini weBurren - I-Airbnb
Imvu, iCarron, embindini weBurren
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguNoirin
Indlu esemaphandleni enamagumbi aliqela kwiiBurren ezintle. Indawo yokuphumla uze wonwabele iindawo ezintle ezisemaphandleni okanye indawo yokuqala yokuzonwabisa oyikhethileyo yeyakho. Le ndlu isemaphandleni ibe kuthatha nje imizuzu eyi-5 ukuya kwicawa ephakathi yeTemple Cronan kunye neSt Cronan. Le ndlu isemaphandleni ime kakuhle ngenxa yezinto ezininzi ezinomtsalane zaseBurren nakwindawo ebanzi yaseNorth Clare kwaye ikwimizuzu eyi-10 kuphela ukusuka eWild Athlantic.
Le ndlu isemaphandleni inemihla ngemihla, inamagumbi aliqela kwaye itofotofo. Inamagumbi okulala ayi-3 angaphantsi. Yonke iminyango esemazantsi iyakwazi ukusetyenziswa kwisitulo esinamavili (iminyango evulekileyo eyi-80cm) njengoko kunjalo kwiyunithi yeshawa engaphantsi. Kukho ikhitshi elinento yonke kunye nezinto zokupheka kunye nezinye izinto ezisisiseko ezikhoyo iTi, ikofu njl njl. Ukubhatalela ifowuni kuhle kodwa kunokwenziwa ngamaxesha athile kwindawo eqhelekileyo. I-WiFi iyafumaneka kodwa inokusetyenziswa ngokulula umz. ukufikelela kwi-imeyile. Onke amagumbi okulala makhulu ngokwaneleyo ukuba athathe ikhothi yosana ukuba kuyimfuneko. Isitulo esiphakamileyo somntwana kunye negeyithi yezitepsi ziyafumaneka xa kucelwa.
5.0 · Izimvo eziyi-130
ICarron yidolophana encinci esemaphandleni embindini weBurren eNorth Clare. Ime kakuhle ekuhloleni iBurren & Cliffs of Moher UNESCO Global Geopark enento elungiselelwe wonke umntu.
Umbuki zindwendwe ngu- Noirin
Ndihlala kufutshane nendlu esemaphandleni ibe ndiza kudibana nawe xa ufika ibe ndiza kufumaneka kuwe xa kukho nayiphi na imibuzo okanye iingxaki onokuba nazo ngexesha lokuhlala kwakho. Ndingavuya kakhulu ukuncedisa ekucwangciseni uhambo losuku.
Ndihlala kufutshane nendlu esemaphandleni ibe ndiza kudibana nawe xa ufika ibe ndiza kufumaneka kuwe xa kukho nayiphi na imibuzo okanye iingxaki onokuba nazo ngexesha lokuhlala kwa…